Nhau Junkies Archives - TMC App
Uri Kuitiswa Here? Nzira yekuziva sei vanonyengera?
Isu tese tinoda kuti zvidikanwi zvedu zvisangane, asi vananyengeri vanoshandisa nzira dzakavanzika. Kubata… Read More »Uri Kuitiswa Here? Nzira yekuziva sei vanonyengera?
Izvo zviri nyore nyore kumhanyisa spyware pane yako yakakosha imwe smartphone
Dai 22, 2017 Dai 22, 2017
Dai iwe waifunga chete kuti hurumende yakafambira mberi yekuongorora maturusi ei iPhone yako kana Android… Read More »Izvo zviri nyore nyore kumhanyisa spyware pane yako yakakosha imwe smartphone
Google inoziva zvakawanda sei nezvako? Zvako zvinyorwa paGoogle?
Dai 15, 2017 Dai 15, 2017
Vazhinji vedu tasvika pakubvuma chokwadi chekuti zvakanyanyisa kunaka zvese zvatinoita… Read More »Google inoziva zvakawanda sei nezvako? Zvako zvinyorwa paGoogle?
-Makore-masere Akashungurudzwa Asati Azviuraya
Dai 13, 2017 Dai 13, 2017
Vakuru vechikoro havana kumboudza amai vemukomana ane makore masere ekuberekwa Ohio uyo akazviuraya iye kuti… Read More »-Makore-masere Akashungurudzwa Asati Azviuraya
Iyo 'digital heroin': Ma skrini anochinja sei vana kuva psychotic junkies
Dai 12, 2017 Dai 12, 2017
Susan * akatengera mwana wake ane makore matanhatu John ipad apo aive mugiredhi rekutanga. “Ini… Read More »Iyo 'digital heroin': Ma skrini anochinja sei vana kuva psychotic junkies